Kuo waxay saadaalisay AirPods 3 qeybtii hore ee 2021 | Waxaan ka socdaa mac
Kuo wuxuu saadaaliyay AirPods 3 qeybta hore ee 2021
Sida falanqeeyaha uu uga digay dhowr saacadood ka hor in MacBook Pro iyo iMac cusub oo ay la socdaan farsameeyayaasha ARM ay imaan doonaan sanadkan, falanqeeyaha Ming-Chi Kuo, wuxuu sharxayaa in moodooyinka cusub ee AirPods aan lahayn magacaabista Pro laakiin leh naqshad la mid ah kuwan, ayaa imaan lahaa inta lagu jiro qeybta hore ee sanadka. Xaaladdan oo kale waa qaabka raaci lahaa jiilka labaad ee AirPods oo ay bilawday Apple bilo ka hor taasna macno ahaan waxay hagaajin kartaa naqshadeynta iyada oo la jaanqaadeysa Pro-da oo umuuqata in laga qiimeeyo noocii hore.
AirPods isku qaab ah
Moodooyinka Apple ee AirPods dhammaantood waxay ku dhamaan karaan isku mid marka laga reebo xanta AirPods Studio. Xaaladdan oo kale waxa Kuo ku sharaxaya warkan cusubi waa taas Sameecadaha dhagaha ee Apple waxaa lagu waafajin karaa qaabeynta iyo waxqabadka qaabkii ugu dambeeyay ee la bilaabay iyadoo la joojinayo buuqa iyo kuwa kaleba inay noqdaan moodeel gaar ah oo sameecadda taleefanka gacanta ee "dhegta ah" sidaa darteed suurtagalnimada haysashada madaxa loo maleynayo inuu yahay AirPods waxay qaadan doontaa xoogaa xoog ah.
Waxa kale oo uu sharaxayaa in sameecadaha dhagaha la 'ay imaan karaan inta lagu jiro qeybta hore ee sanadka, tani waa wax umuuqda inay muuqato iyadoo la tixgelinayo in Apple ay soo saartay AirPods-kii ugu dambeeyay bishii Maarso, sidaa darteed waxaan fahamsanahay in shirkaddu ay bilaabay kiiskan moodooyinka cusub inta lagu gudajiray qeybtii hore ee sanadka soo socda kanina wuxuu diirada saarayaa Macs, iPhone iyo aalado kale. Waxaan arki doonaa dhamaadka haddii Kuo saxan tahay oo aanan haysan wax AirPod cusub ah sanadkaan sida ilo kale lagu xamanayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Kuo wuxuu saadaaliyay AirPods 3 qeybta hore ee 2021
Kuo wuxuu saadaaliyay ARM iMac iyo 13-inch MacBook Pro ARM sanadkaan
EzyCal, jadwalka barta sare ee bilaashka ah oo bilaash ah oo bilaash ah